सञ्जयको किलिमन्जारो यात्रा « KhelkudNews.com
सञ्जयको किलिमन्जारो यात्रा
Published On : 19 May, 2014 6:10 pm
संजय पण्डित, बर्ष २५ । नेपालका सर्वाधिक लामो दुरिका अल्ट्रा धावक एवं विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा तथा किलर माउन्टेन भनेर चिनिने मनास्लु आरोहण गर्ने विश्वकै प्रथम अल्ट्रा म्याराथन धावक । यी दुवै शिखर आरोहण गर्ने नेपालका प्रथम खेलाडी । भर्खर मात्र उनले अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर किलिमान्जरो (५८९५मि.) को ऐतिहासिक रेकर्ड सहित आरोहण सम्पन्न गरेका छन् । उनले आरोहणको क्रममा भोगेका तितामिठा अनुभव उनकै शब्दमा
लक्ष्य सातै महादेशका सातै सर्वोच्च चुली चुम्ने
किलर माउन्टेन मनास्लु तथा सगरमाथा पछिको आरोहरणले मलाई अझै केही ऐतीहासिक कार्य गरौं गरौं भईरहन्थ्यो । मेरा प्रत्येक सपनाहरूले विजय उत्सव मनाईरहेका हुन्थे । मैले देख्ने हरेक सपनाहरूलाई विपनामा कसरी रूपान्तरीत गर्नुपर्दछ भनेर म मरिहप्ते गरी त्यसप्रति समर्पित हुन्थे र सफल गनत्व्यमा पुग्दथे । ८००० मि. माथिका हिमाल आरोहण गरिसकेपछि मैले हिमाललाई राम्रोसाग बुझेको थिए । म पटक पटक मृत्युको मुखबाट बचेको कुरा तथा मनास्लुमा १४ जना पर्वतारोहीको मृत्यु र सगरमाथामा आफ्नै गाईड लोपशाङ शेर्पाको मृत्युले क्षत विच्छेद भएको मेरो मानसपटलमा अब नयाा योजनाले बास बसालिसकेको थियो । संसारका सात महादेशका सातै उच्च शिखर आरोहण गर्ने तर यो सपनासागै चुनैतिहरू धेरै थिए मसाग डर, खुसी, आवेग, विजय पराजयको संकेत हरेक पटक गुन्जिरहेका हुन्थे । हरेक सुखद भविष्य प्राप्तीका लागि वर्तमानमा निकै ठूला दुखका पर्खालहरूलाई भत्काउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दै अगाडि बढिरहेको थिए ।
गन्तव्य ज्वालामुखी पहाड किलिमान्जारो
अनेक दु:ख र सुखका बिच मैले अफ्रिकाको उच्च शिखर आरोहण गर्ने निर्णय लिए । अफ्रिका महादेशको तान्जेनियामा स्थित यो पर्वको बारेमा नाम मात्र सुनेको थिए तर यस पर्वतले विश्वमै एउटा आफ्नै इतिहास बोकेको कथा भने प्रत्यक्ष आरोहणको सिलसिलामा मात्र बुझ्न सफल भए ।
टर्कीमा २७ घण्टा ट्रान्जिट
नेपालबाट २६ मार्च विहान ८:३५ मा उडान थियो हाम्रो तर प्रतिकुल मौसमका कारण करिब ७ घण्टा पछि मात्र उडानले पूर्णता पाउादा हामी २:३० बजे मात्र उडान भर्न सफल भयो । टर्किको व्यस्त शहर इस्तनबुल एयर पोर्टमा निर्धारीत समय भन्दा निकै पछि पुर्‍याएको हुनाले मैले इस्तनबुलबाट तानजेनियाको किलिमान्जारो एयरपोर्टको विमान गुमाउनु पर्‍यो । एक्लो यात्रा गर्दा असहज त हुँदो रहेछ । तर के गनुर्, मसँग सपना थियो । त्यहि सपनालाई विपनामा साकार गर्नको लागि जस्तो सुकै दु:ख सहन पनि तयार हुादै गन्तव्य सुनौलो बनाउने कोशिस गरिरहेको थिए ।
इस्तानवुलको यादगार बसाई
विकासको हिसावले अत्यन्त फड्को मारिरहेको टर्कि बसाई एकदम यादगार रहिरहने भयो । हरेक छोरा छोरीका बाबुआमाले वर्तमानमा राम्रो काम गरेर ख्याति कमाइदिए भने भविष्यमा उनीहरूको भविष्य सम्पन्नशाली हुन्छ । देश बनाउने र विकास गर्ने जिम्मा राजनैतिक नेताहरूको हो सायद यदि विगतका दिनमा राजनीति गर्ने नेताहरूले सगरमाथाको देश तथा गौतमबुद्ध जन्मेको देश नेपाललाई तिव्र विकास गरिदिएको भए नेपालीले युरोपको जस्तै जिवन वेतित गर्ने थिए होला ।
तान्जेनिया प्रवेश र टर्किश एयरलाइन्सको साथ
राती २:३० बजे तान्जेनियाको किलिमान्जारो २९ मार्च एयरपोर्टमा प्रवेश गरियो । टर्किश एयरलाइन्सका कन्ट्री म्यानेजर तथा सेल्सम्यानेजरले मेरो आगमनको प्रतिक्षा गरि बसेका रहेछन. । मलाई देख्दा वित्तिकै उनीहरूले हार्दिकताका साथ स्वागत गर्दै किलिमन्जरोमा फर फराउने लोगो अङ्कित झण्डा हस्तान्तरण गरे र मैले प्रतिज्ञा गरे झण्डा अफ्रिकाकै सर्वोच्च शिखरमा फहराउने । एयरपोर्ट बाहिर सकिना क्याम्पका प्रर्वन्ध निर्देशक रोर्वटले मलाई प्रतिक्षा गरेर बसिरहेका रहेछन जसले मेरो सम्पूर्ण जिम्मा लिएका थिए आरोहणको, करिब १ घण्टा कार ड्राइभ पछि हामी सुन्दर पर्यटकीय नगरीय आरूसामा पाइला राख्न सफल भयो ।
नेपालको काठमाडौं जस्तो देखिने तान्जेनिया अवस्थित शहरलाई देख्दा लाग्यो म काठमाडौंको बानेश्वर, ठमेलमा त छैन ? भन्ने लागिरहेको थियो । यहाा यस्तो वातावरण थियो कि अव्यवस्थित मोटर वाइक, हेल्मेट विनै हुइकिने वाइकहरू, भर्खरै निर्माण हुादै गरेका घरहरू, बाटैभरि चौपायाहरू त्यस्तै जताततै इण्डिएन तथा चाइनिज सरसमानहरू देख्दा इण्डियाकै एउटा प्रान्त जस्तो लाग्दथ्यो । २९ मार्चमा पूर्णरूपमा आरूसामै विश्राम गरेपछि हामी ३० मार्चमा किलिमान्जरो यात्रामा निस्कने योजना बनाएका थियौ ।
किलोमान्जारो नेशनल पार्कमा लम्कदा
आरूसाबाट करिब ४ घण्टाको जिप ड्राइभपछि किलिमान्जारो गेटमा आइपुग्यौ । केहिछिनको विश्रामपछि हामी लाग्यौ पहिलो क्याम्प मण्डारातर्फ । यहााको किलिमान्जारो नेशनल पार्कले पर्यटकहरूको लागि अत्यन्त सुविधा गरिदिएको रहेछ । पर्यटकको लागि छुट्टै पदमार्ग तथा भरियाहरूको लागि छुट्टै मार्ग किलिमान्जारो गेटदेखि मण्डारासम्मको यात्रा भने निकै कष्टकर भयो । हामी हिड्दै गर्दा निकै ठूलो पानी पर्‍यो । यो समय तान्जेनियाको वर्षाको समय रहेछ । २ घण्टाको अत्यान्त कष्टकर यात्रापछि आजको गन्तव्य मण्डारामा पुग्न सफल भयौ । यहााको सरकारले पर्यटकहरूका लागि खाने, बस्ने र सुरक्षाको अत्यन्त राम्रो व्यवस्था गरिदिएको रहेछ । यो देख्दा यस्तो लाग्यो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको देश र हिमालै हिमाल भएको देशमा विदेशी पर्यटकहरूको लागि सुरक्षा तथा खाने बस्नेको प्रवन्ध गरिदिए पर्यटकहरूले शान्तिको आवास छर्दै विश्वभर नेपालको सन्देश पुर्‍याउथे होला जस्तो लाग्यो । सरकारले प्रत्येक हटहरूमा सुरक्षा फोर्स सहित रेन्जरहरू राखीदिएको रहेछ । लाग्थ्यो अफ्रिका महादेश अशान्त गरिबी तथा भोकमरीको महादेश भनेर चिनिएता पनि तान्जेनिया पर्यटकहरूका लागि एकदम शान्त र पर्यटकलाई भगवान जस्तै पुुज्ने देश भनेर सम्झिए ।
त्यो ३ घण्टा १५ मिनेट
मण्डरा, होरम्बो हुदै किवो देखि किलिमन्जारोको उच्च शिखरमा सामान्य आरोहीका लागि ३ दिनमा पुग्ने गर्दछन् । किनकी वातावरणसाग घुलमिल हुँदै जानुपर्दछ । किवोमा १ दिनको आराम पश्चात मात्र आरोहीहरूले रातको १२,१ बजे शिखरको लागि यात्रा तय गर्दो रहेछन् । सायद मैले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा तथा अन्य हिमालहरूको पनि आरोहण गरेर होला मलाई त्यहााको बाटो एकदमै सजिलो तथा फिक्का लागिरहेको थियो । मैले मण्डरादेखि किवो (अन्तिम क्याम्प) सम्मको यात्रा गर्न केवल ३ घण्टा १५ मिनेट तय गरे । म र मेरो स्पिडलाई देख्ने अन्य आरोही तथा सुरक्षाका लागि खटिएका रेन्जर दस्ता र मलाई गाइड गरिरहेका हाविव पनि मेरो समय देखेर आश्चर्यमा परिरहेका थिए ।
अन्तिम क्याम्प किवोमा पुग्दा
मण्डारा देखि अन्तिम क्याम्प किवोमा जम्मा ३ घण्टा १५ मि.मा पुग्दा त्यहाा रहेका रेन्जर फोर्सले मसाग प्रश्न गरे ह्वेर आर यू फ्रम ? भनेर अनि मैले नेपाल भनेर भनिदिए । उनीहरूले नेपालको नाम सुनेका रहेनछन त्यसपछि फेरी उनीहरूले भने यु आर भेरी स्ट्रङ्ग म्यान भनेर त्यसपछि मैले भने आइ डिड माउण्ट एभरेष्ट, त्यसो भन्दै गर्दा बल्ल माउण्ट एभरेष्ट नेपालमा पर्छ भनेर भने ? मैले हो म सगरमाथा भएको देश र गौतम बुद्ध जन्मेको देशबाट यो हिमाल आरोहण गर्न आएको हु र मलाई सबै नेपाली तथा आरोहीको शुभकामना र सद्भाव छ । भन्दै गर्दा उनीहरूको पनि सपना रहेछ । सगरमाथा आरोहण गर्न मैले हाम्रो देशमा आउनको लागि उनीहरूलाई आग्रह गरे । २ बजेतिर किवोमा पुगिसकेको मलाई अत्यन्त टाउको दुखेको आवास भइरहेको थियो र मलाई लाग्यो हाइ अल्टिच्युड सिकनेश भै छाड्यो तर केहि छिनको विश्राम पछि मेरो शरीर केहि सन्चो भएको अनुभव भयो । एकैछिन पछि मेरो गाइड हाविव आएर भन्न थाल्यो मौसम अत्यन्त राम्रो छ जाउा समिट गर्न भनेर र उसले भन्दै थियो । हामी रातको ८ बजे तिर शिखरमा पुग्न सक्छौ भनेर तर मैले देखिरहेको थिए रातको १२ बजे आरोहणमा निस्किएका आरोहीहरू अझै अन्तिम क्याम्पमा फर्किएका थिएनन्, रातको ८ बजे शिखरमा पुग्यौ भने अध्यारोको कारणले गर्दा फोटो स्पष्ठ नआउन सक्छ । तथा भिडियो किलियर नआउने हुनाले मैले जान इन्कार गरे तर हाविवले धेरै कर गरेपछि म बाध्य भए आरोहणको लागि २ बजेर २५ मि. मा हामीले किलिमान्जारो जाने यात्रा तय गर्‍र्यौ । सगरमाथा क्याम्प ३ जस्तो लाग्ने बाटो देख्दा लाग्थ्यो कतै म सगरमाथाको आरोहरण गर्न लागेको त छैन ? केवल रक र ढुङ्गा विचबाट हिड्नुपर्ने उक्त बाटोमा शिखर चुमेर फर्केका आरोहीले भन्दै थिए, तिमीहरू कति बेला शिखर चुम्ने हो भनेर । मेरा गाइड आशावादी थिए र म पनि उज्यालो हुादै शिखर पुगिन्छ कि भन्ने झिनो आशा सहित उसको बाटो पछ्याइरहेको थिए । करिव डेढ घण्टाको हिडाइपछि हामी गिल्मन्स प्वाइण्ट (५६५८ मि) मा आइपुग्यौ । त्यहााबाट देखिने अन्तिम बिन्दु नै अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर हुरूर (५८९५ मि) पिक रहेछ । हामी हाम्रो गन्तव्य चुम्न यति लालहित थियौ कि हामीलाई त्यो विन्दुसम्म जानको लागि करिव १ घण्टा ३३ मि. मात्र लाग्यो बेलुकाको ५ बजेर २१ मिनेट जाादा अफ्रिकाको सर्वोच्च पिक हुरूर तथा किलिमान्जारो हिम श्रृङखलाको सफल आरोहण गरियो । त्यहााबाट देखिने हिमश्रृङखलाको दृश्य अत्यन्त रमाइलो देखिन्थ्यो । ज्वालामुखि विष्फोटनबाट बनेको किलिमान्जारो श्रृङखलाबाट हेर्दा पुरै गेलेशियर बाहेक केहि देखिने थिएन । जब शिखरमा पुगियो अत्यन्त हावा लाग्यो र हिउा पर्न थाल्यो सायद तान्जेनियामा वर्षातको समय भएर पनि होला हत्केलाहरू निक्कै कठाङ्गरिय तर पनि यसलाई सहर्ष स्वीकार्दै एउटा अर्को सपना पुरा भएको निष्कर्ष निकाल्दै हामी ओरालीन सुरू गर्‍यौ ।
साउथ एसियाको स्पिड पर्वातारोही भएछु
मेरो गाइड हाविव तथा रेन्जरहरूको भनाइमा उनीहरूले म जस्तो स्ट्रङ्ग तथा छिटो हिड्ने आरोही यो भन्दा अगाडि देखेका तथा आरोहण गराएका थिएनन रे । हाविवले भन्दै थियो मैले अहिलेसम्म एक सय पन्ध्र आरोहीलाई आरोहण तथा भरियाको रूपबाट सघाएको तर तपाईजस्तो स्पिड क्लाइम्बर आज सम्म कहिल्यै देखेको थिएन भनेर मलाई भनिरहेको थियो । मैले पनि मनमनै सहमति जनाए र गर्व गरे म सगरमाथाको देशमा जन्मिएको र सर्वोच्च शिखर सगरमाथा तथा अन्य हिमाल आरोहण गरेको दम्भ देखाए । नेपालका अहिले सम्म १४ जना अरोहीले मात्र उक्त हिमाल आरोहण गरेको मसाग ज्ञान थियो । त्यसपछि हामी किलिमान्जारो राष्ट्रिय पार्कमा आएर हामीले गरेको सम्पूर्ण समय तथा प्रमाणहरू दियौ र साउथ एसियाबाट ९७ जना आरोहीले मात्र मराङ्गु रूट भएर आरोहण गरेको कुराको स्पष्ट पार्दै मलाई फाष्टर क्लाइम्बरको प्रमाणपत्र दिने कुराको सहमति जनाए ।
किलिमान्जारो अर्थ त्यहााको स्थानिय भाषामा स्वतन्त्र हुादो रहेछ । किलिमान्जारो आफैमा अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर रहेनछ । किलिमान्जारो जम्मा ३ वटा पहाडबाट बनेको श्रृङखला रहेछ । त्यो पुरै क्षेत्रलाई किलिमान्जारो हिमश्रृङखला भन्दो रहेछ । ५८९५ मि भनेको हुरूर पिक रहेछ । यो संसारको एउटा मात्र यस्तो पर्वत रहेछ जुन फ्रि स्टेण्टिङ्ग माउण्टेन भनेर चिनिएको रहेछ । एउटा मात्र रेन्जबाट बनेको विश्व कृतिमानी ज्वालामुखी पहाड।
म नेपाल भरका खेलाडिको प्रतिनिधित्व गर्दै शिखरमा पुगेको थिए । हरेक खेलाडिको विचार र विश्वास शिखर जस्तै अटल हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै मैले नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडि संघ, नेपाल ओलम्पिक कमिटि तथा रा.खे.प.को झण्डा अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखरमा र्फफराए । मैले त्यहि शिखरबाट श्रद्धाञ्जली दिए ती १४ जना आरोही जुन मनाश्लु आरोहणको क्रममा हिमपहिरोमा परेर सधाका लागि विदा भए त्यसै गरी मैले मन र मुटु देखि सम्झे मलाई सगरमाथा आरोहणका क्रममा गाइड भएर सघाएका लोप्साङ्ग शेर्पा जसलाई मैले सगरमाथामै सधाका लागि गुमाएको थिए । मैले उनीहरूको सम्झनामा किलिमन्जारो शिखरमा निकै आशु बगाए ।
अन्त्यमा, विशेष धन्यवाद :
गोल्डेनगेट इन्टरनेशनल कलेज रन पिस जोर्नी नेपाल देखि अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर भन्ने अभियानमा सहयोग गर्ने आइएमई गु्रप, टर्कीस एयरलाइन्स, कान्र्तिपुर इन्टरनेशनल कलेज, जि.वि.स प्युठान, हाम्राकुरा डट कम कोशी मेनपावर, द रिभर मेनपावर, नेपाल युवा उद्यमी मञ्च, सिल्भर माउन्टेन कलेज, काठमाडौं बर्नहाट कलेज, सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम, मुभमेन्ट फर चेन्ज तथा टिकुरी सकृय युवा समुहलाई हार्दिक धन्यवाद । यो मेरो यात्रालाई प्यूठानी जनताले सधै साथ र सहयोग दिएका छन वहााहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद !